काठमाडौँ, बार्सिलोनाका ब्राजिलियन फरवार्ड नेइमारले रेकर्ड ट्रान्सफर बार्सिलोना छोड्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् ।
नेइमार फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) मा अनुबन्ध हुन लागेको र त्यसका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बेलायती मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
मेट्रो पत्रिकाले सम्झौताका लागि नेइमार राजी भएको र अनुबन्धन सम्झौता आउँदो सोमाबार वा मंगलबार हुने दाबी गरेको छ । त्यस्तै डेली मेलले भने पीएसजीले अर्जेन्टिनाका आफ्ना खेलाडी डी मारियालाई प्रयोग गरेर नेइमारलाई ल्याउने पहल गरिरहेको जनाएको छ । पीएसजीले नेइमारको डीलमा तिर्नु पर्ने रकम कम गर्नका डी मारियालाई दिने प्रस्ताव गरेको जनाउदै डेली मेल लेख्छ बार्सिलोनाले यस अघि नेइमारको सम्झौता रकममा नेगोसियसन नगर्ने विचार परिवर्तन गरेको छ ।
पिएसजीले नेइमारलाई १९ करोड ७० लाख पाउण्ड स्ट्रर्लिङमा अनुबन्ध गर्न लागेको हो । नेइमारका बुवाले पिएसजीसँग छलफल गरिरहेको र नेइमारले पिएसजीसँग पाँच वर्षको सम्झौता गर्ने लगभग पक्का भएको उल्लेख गरिएको छ । नेइमारले पिएसजीमा गएपछि वर्षको झण्डै दुई करोड ७० लाख पाउण्ड कमाइ गर्ने छन् ।
एशियन खेलको लागि फुटबल टिमको छनौट, को को परे ?
काठमाडौँ । इन्डोनेसियामा हुने १८औं एशियन खेलका लागि २० सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै इन्डोनेसिया जाने अन्तिम
अर्जेन्टिनाको म्यानेजर सामपाओलीलाई खेलाडीले हटाउन चाहन्छन भन्ने हल्लामात्रै : अर्जेन्टिना फुटबल फेडेरेशन
ब्रोनिट्सी, रूस । क्रोयसियासँग बिहीबार भएको विश्वकप खेलमा अर्जेन्टिनाले लज्जास्पद हार ब्यहोरेको र यसका कारण खेलाडीले प्रशिक्षक जर्ज सामपाओलीलाई हटाउन चाहेका भन्ने समाचार आफ्नो समूहविरुद्ध अफवाह फैलाउन रचिएको प्रपञ्चबाहेक केही नभएको अर्जेन्टिनाले
काठमाडौँ । विश्वकप फुटबलमा समुह इ अन्तर्गत ब्राजिल र कोष्टारिकाबीच आज खेल हुदै छ । नेपाली समय अनुसार ५:४५ मा हुने यस खेलमा ब्राजिलका स्टार खेलाडी नेइमार खेल्ने भएका छन्
नेइमार फेरी घाइते, अभ्यास बिचमै छोडे !
काठमाडौँ । ब्राजिलका स्टार खेलाडी नेइमार फेरी इन्जुरीका कारण विश्वकपको खेल गुमाउन सक्ने देखिएको छ । मंगलबार अभ्यासका क्रममा नेइमारलाई सहयोगीले मैदान बाहिर लैजादै गरेको देखिएपछि नेइमार विश्वकपको अर्को खेलमा खल्ने